Ukuphrinta Kwenziwe ngentando kanye Nezinsizakalo Zebhizinisi Elithuthukile - Iphromoshini ye-J & M 2000 - iMessina
Izinkampani Zezinsizakalo Zomuntu Ezenzelwe Umuntu Owodwa: I-J&M 2000 Ukukhuthaza
Amaphrinta wedijithali enziwe ngokwezifiso kunoma yiluphi uhlobo lokuxhaswa kokuxhumana okunomthelela
Amaphrinta ngokwezifiso e Izinsizakalo ezithuthukisiwe zezinkampani: lo ngumkhakha wokuqokwa kwe Iphromoshini ye-J & M 2000, inkampani egunyaziwe neyasungulwa a Messina, iphayona kuyo yonke insimu yezwe Ukufinyeleleka kwezinguqulo zedijithali ezenziwe ngezifiso izinkampani yanoma iyiphi i-oda nosayizi.
Amaphrinta wokwenza ngokwezifiso nezinsizakalo zebhizinisi athuthukile: Umthelela wokuxhumana kwebhizinisi isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-20
Izinsizakalo zezinkampani ikhathalogi enkulu kakhulu ye imikhiqizo yokuphrinta eyenziwe ngokwezifiso: Iphromoshini ye-J & M 2000 ubelokhu uyitshe legumbi emkhakheni iminyaka engaphezu kwengu-20 Ukuxhumana kwebhizinisi futhi we Marketing. Ihlanganiswe ngokuphelele endaweni yedolobha kanye nesifundazwe sase Messina ngenxa yokukhiqizwa kwe Phrinta imikhiqizo okunomthelela, okubalulekile futhi okuhlukahlukene, okulungele zonke izidingo namakhasimende. Volikhali, amakhadi webhizinisi, amaphaneli futhi Izimpawu ze-forex, amaphosta, Songa, ama-ajenda, izitembu e amakhalenda okwenziwe ngezifiso zimane ziyisibonelo sekhathalogu enkulu ye imikhiqizo yokuphrinta yakhelwe izinkampani zazo zonke izinhlobo nezinhlobo.
Amakhalenda, amapeni, ama-ajenda, izitembu nezinsiza ezenziwe zaba ngezakho: i-J & M idala amagajethi ngomkhiqizo wakho ngamanani aphansi
Amakhalenda okwenziwe umuntu uqobo, amasongo okhiye, omantshi, izibaya namadayari ngomkhiqizo wenkampani yakho kungezinye ze- amagajethi wangokwezifiso yenziwe yinkampani Iphromoshini ye-J & M 2000. Ngisho nezinto zokuhlobisa ezifana izigqoko e amahembe ngokwezifiso vumela amakhasimende ethu ukuthi akhethe izixazululo eziphumelela kakhulu ukukhangisa futhi i ukuxhumana yenkampani yabo. Ngakho-ke kuzokwenzeka, ngenxa yochwepheshe bethu, ukuvuselela umkhiqizo wakho nokudala impahla yolwazi o ukukhangisa, njengami i Amakhalenda owenziwe umuntu ne-logo yenkampani. Lapho ukuxhumana kwezamabhizinisi idla nsuku zonke amaphrinta e amagajethi wangokwezifiso, okubonisa isibopho osisungula namakhasimende akho. Ukuze uthole lokhu, sikunikeza igajethi zenani elikhulu futhi enchy njengoba amadayari, amapeni, amasongo okhiye o izikibha ezenziwe ngezifiso nomkhiqizo wakho.
Amapaneli we-Forex nezibonakaliso nemikhiqizo yokuphrinta eyenziwe ngezifiso yazo zonke izinhlobo
Phakathi kwabaningi imikhiqizo yokuphrinta e amagajethi wangokwezifiso, uzothola amaphaneli e Izimpawu ze-Forex ngezindlela ezahlukahlukene. Ukukhetha okubanzi okuzobe sekuqhubeka kukho Amakhalenda anemifanekiso kanye nedayari eyenziwe ngezifiso ngebhizinisi lakho. Ungazikhetha futhi uzenze zenziwe ngezifiso zibonga kuwebhusayithi yethu enikezelwe kuzo Amakhalenda okwenziwe ngezifiso futhi unga-oda Igajethi, ama-ajenda, Iphenathi, ama-silhouette nezinye izinto eziningi ezenziwe ngezifiso logo noma uphawu lwakho. THE Amakhalenda Anemifanekiso Egqamile enziwe atholakale kuwe, bazokunikeza konke okudingayo ukuxhumana kwakho, kukuvumela ukuthi wenze ukweqa ngekhwalithi oyidingayo ukwakha ukwethembeka kwamakhasimende enkampanini yakho.
Izicucu Zokuxhumana Kwebhizinisi Nokuthengisa Okumanyeneyo
Ukuxhumana ngobumbano namasu we Marketing e ukubonakala ngebhizinisi lakho. Noma ngisho namagajethi amahle noma izesekeli zasekhaya nezokusetshenziswa komuntu siqu, ukuvuselela impilo yakho yansuku zonke. Kunamathuba amaningi onawo ngenxa yokubonga kwethu Ikhalenda, ama-ajenda, amahembe, izigqoko, amasongo okhiye kanye Igajethi zazo zonke izinhlobo.Iphromoshini ye-J & M 2000 eMessina Kuphinde futhi kube nokukhangisa nokukhangisa, imikhakha lapho kudlula khona ngokubonga ngezinsizakalo eziningi zewebhu ezithuthukile zika Social Media Marketing e Ukukhangisa kwe-inthanethi. Njengasendabeni ye Izicucu ezenziwe ngokwezifiso, lezi zinsizakalo zibuye zenziwe ngokwezifiso ngezidingo nezinhloso zamakhasimende, ezenziwe ngobuchwepheshe obuhle kakhulu nethimba elisebenza kahle nelikwaziyo. Ngakho-ke i-J & M 2000 Promotion izibonakalisa nsuku zonke njengenkampani ehamba phambili ku ukuxhumana e Ukukhangisa, hhayi kuphela ekuxhaseni ngokomzimba nangephepha, kodwa futhi emkhakheni wamasu afana newebhu.
Umakhala ekhukhwini: 327 3209886